माफ गर पार्वती! मरेका मान्छे मात्रै यो दुनियाँमा फर्केर नआउने होइनन्, आफूसँग भएको मान्छेलाई पराकाष्ठा नाघ्ने गरी क्षुद्र व्यवहार गर्‍यो भने उनीहरू पनि कहिल्यै फर्केर आउँदैनन्।
सँगै हुर्केको म तिमी बाँचेको जीवनसँग फूल छ भने उखेलेर फाल पर फाल सँगै हुर्केको झार अनि अनि पो बल्ल सिंगो गुराँस फक्रिन पाउँछ!
साथीको रेस्टुरेन्टमा आएका साथीहरू रुचिअनुसारका परिकारको स्वाद लिएर सन्तुष्टि डकार्दै बाहिर निस्कने बेला हात मिलाउँदै भने, ‘हामीबाट केही सहयोग चाहिए अप्ठ्यारो नमानी भन्नु है।’
चारओटा अप्सन पनि फेल खाएपछि मेरो मस्तिष्क तात्दै थियो तर म शान्त बस्ने कोसिस गरे। फेरि एकपल्ट प्रश्न दोहोर्‍याउन भने–जन्मेपछि सबैले मान्नु नै पर्ने ध्रुवसत्य कुरा के हो?
वसन्तपुरको सडक बालक
हामी हिमाल रेस्टुरेन्ट पुग्यौ। भित्र पस्नेबित्तिकै नेपालीपनको झझल्को लाग्ने हिमाल, गुराँस, डाँफे र बुद्ध आदिका तस्वीरहरू भित्तामा राखिएका थिए। काउन्टरमा बस्ने जापानीजस्ती युवतीले निहुरेर ‘नमस्ते’ भनिन्।
मानिसले चाहे एकैछिनमा आयु सकिन्छ। के गर्नु मिठो खान दिए भनेर दंग पर्नु पनि छैन। तागतिलो मिठो खुवाएर बलियो बनाएर हाम्रो शरीरमा धेरै मासु उत्पादन होस् भन्छन् मानिसहरूले। हामीलाई त्यसरी मात्र हेरेका हुन्छन् सधैं। यसरी कथा सुनाउँदै गई घोर्लीले।
नागरिक ७ मंसिर २०७८ मंगलबार ४ मिनेट पाठ
भुँडी पुराण प्रकाशनद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा साहित्यकार श्रीओम श्रेष्ठ रोदनले इन्दिरा दीक्षितको कथासङ्ग्रह ‘परदेशी मित्र’ को विमोचन गरे।
रहरमा नथाकेका पाइलाहरू
यी गुराँसका रूखहरू चैतवैशाखमा रातै हुने गर्छन्। जंगलमा झ्याउँकिरीको संगीत भने गुञ्जायमान थियो। अचेल झ्याउँकिरीको सुन्दर संगीत सुन्न पाइन्छ जंगलमा।
नागरिक ६ मंसिर २०७८ सोमबार १२ मिनेट पाठ
हिंसाको बोली बोल्नेको दोष देखिन्छ भोलि। आस्था विभिन्न गाली पर्याप्त व्यक्तित्व चिन्न। रोप्ने तिमी हौ विकृति फल्दा किन तर्सियौ?
कठै लाग्छ यो नमिल्दोपनसँग बाँचेर मरेका पोस्टरहरू देख्दा झन् कुहिरोमा हराएका कैयौं कागका बथान चोइटिरहेझैं लाग्छ।
पिउँदै दुःखका आँसुहरू घोटेर श्रमका करङहरूमा पसीनाको धारामा पौड्दै आफ्नै परिवार पाल्न जुटिरहँदा म नाङ्गो भएँ बेजमान भएँ साँचो अर्थमा तिरस्कार भएँ।
यही छातीमा हिमाल
यही छातीमा हिमाल यही छातीमा पहाड, यही छातीमा तराई हाम्रो प्यारो देश नेपाल। यही हिमाली टाकुरामा डाँफे चरी नाच्छन् ,यही पहाडमा डालीडाली सुनाखरी हाँस्छन्।
आजबाट नेपाल मानव अधिकार अन्र्तराष्ट्रिय भर्चुअल चलचित्र महोत्सव
मानव अधिकार चलचित्र केन्द्रको आयोजनामा नौं नेपाल मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय भर्चुअल चलचित्र महोत्सव हुन लागेको छ। केन्द्रले प्रत्येक वर्ष नेपाल मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवको आयोजना गर्दै आएको छ।
नागरिक ६ मंसिर २०७८ सोमबार २ मिनेट पाठ
‘तेस्रोलिङ्गीका अधिकारका लागि सञ्चारमाध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका’
नवौँ नेपाल मानवअधिकार अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सवका अवसरमा आइतबार आयोजित ‘तेस्रोलिङ्गी समुदायको अधिकारमा मिडियाको भूमिका’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रमका सहभागीले ती समुदायले आफ्नो अधिकार अझै प्रयोग गर्न विभिन्न बाधा रहेको गुनासो गरेका थिए।
अहिले लेखक बालबालिका बन्न थालेका छन्
अहिले लेखक बालबालिका बन्न थालेका छन्। अहिले लेखकमा आफ्नो परम्परा चिनाउने गुणको विकास भएको छ। अहिले आफ्नो धर्म, संस्कृति, परिवेश र लयलाई महत्व दिन थालेका छन्।
श्रीराम राई ४ मंसिर २०७८ शनिबार ७ मिनेट पाठ
चिकित्सक कैलाशप्रसाद साहको टफ मेडिसिन सार्वजनिक
बालबालिकाको क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. कैलाशप्रसाद साहको जीवनी ‘टफ मेडिसिन’ सार्वजनिक भएको छ।
नागरिक ४ मंसिर २०७८ शनिबार १ मिनेट पाठ
सुटुक्क केही भन्दैछ
पवनको सुसेलीसँगै कहिले रोकिंदै अनि फेरि हल्लिंदै हेर्दा बैंसले मातिएझैं लाग्ने तर उन्माद यौवनले छिप्पिएका ती बाँसका भौतिक शरीरहरूले मलाई सुटक्क केही भन्दै छ।
जनगणनाको दुर्लभ ठेली
इतिहासकार धनवज्र बज्राचार्य पुराना कागजपत्र किन्दा रहेछन्। एक दिन एकजना तामाङ केटा नेपाली कागजमा हातले लेखिएका तीन थान पुस्तक लिएर आएछन्। उनीसँग धनवज्रले ती तीन थान कागजपत्र किनेछन्। यसरी आएको रहेछ यो लिखत। उनै धनवज्रद्वारा यो ग्रन्थ डा. जगदीशचन्द्र रेग्मीको हात परेछ। यो सामग्री प्राप्त भएपछि डा. रेग्मी यो छपाउन तीन त्रिलोक चौध भवन दौडधुप गर्दा पनि छपाइदिने सज्जन पाउनुभएनछ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्म पनि पुग्नुभएछ।
भैरव रिसाल ४ मंसिर २०७८ शनिबार ८ मिनेट पाठ
'साहित्यले समाजको यथार्थ चित्रण गर्छ'
शुक्रवार ‘१२खरी कथा लेखन प्रतियोगिता –२०७८ विजेता घोषणा तथा पुस्तक विमोचन’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री रिजालले साहित्यले समाजको विकासक्रमको यथार्थ चित्र प्रस्तुत गर्ने बताएका हुन्।
तिम्रा पनि छोराछोरी भइसके। उनीहरूले पनि जे देख्यो त्यही सिक्ने हो। मेरो भगवानसंग कामना छ, ‘मेरो यो अवस्था तिमीले पनि भोग्न नपरोस्।’
कवि दामोदर पुडासैनी ‘किशोर’को यस कविता सङ्ग्रहले वर्तमान समाज तथा जनजीवनका विभिन्न बिम्बलाई जीवन्त रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। कविको भावनालाई अभिव्यक्त गर्ने शैली अपरम्परित तथा अनौठो किसिमको छ।
नागरिक ३ मंसिर २०७८ शुक्रबार १० मिनेट पाठ